အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အဆိုပါဝတ်စားဆင်ယင် quandary: '' ဒါဟာထင်ယောင်ထင်မှားင်. သို့သော်အရာအားလုံး '' ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်” New York မှာဂျက်စီကာ Glenza ကရေးသားခဲ့, theguardian.com သောကြာနေ့ 27 ဖေဖော်ဝါရီများအတွက် 2015 22.41 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အင်တာနက်ယဉ်ကျေးမှု၏ muck ထဲက ထွက်. နေ့စဉ်ရှေးရှေး၏အသိစိတ်သို့တွားဖို့ meme ~ များအတွက်ရှားပါးလုပ်ရပ်ကြောင့်န်. ကအဖြစ်အလျင်အမြန် "ဟုအဆိုပါဝတ်စားဆင်ယင်" ပြုသကဲ့သို့ဖြစ်ပျက်အထူးသဖြင့်လာသောအခါ.
ကြာသပတေးနေ့ညဦးနှင့်နံနက်သည်သောကြာနေ့အကြား, အ်စားဆင်ယင်ခြင်းဖြင့် Tumblr သည်ပို့စ်မှကြီးပြင်း တစ်ဦးအိုင်ယာလန်ဂီတပညာရှင် ဟာနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းနှင့်အကြောင်းအရာကိုမှ အငြင်းအခုန် ကမ္ဘာလုံးအနှံ့.
အ်စားဆင်ယင်မေးခွန်း၏အ crux, နှင့်ဖြစ်ကောင်း၎င်း၏အယူခံဝင်, ရိုးရှင်းသည်: ထို frock အဖြူနှင့်ရွှေ, အပြာနှင့်အနက်ရောင်သို့မဟုတ်?
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုရိုးရှင်းတဲ့အမြင်မှား၏ရလဒ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း, တစ်ခုမရေမရာရှိဆဲ, သို့မဟုတ်ပါကတစ်ဦးပိုမိုရှုပ်ထွေးစေနိုင်တယ်. မည်သို့ပင်အကြောင်းရင်း, ထိုသို့မဖြစ်တောင်မှအမြင်သုတေသီများအပေါ်သဘောတူနိုင်တဲ့ဓာတ်ပုံတပုံင်.
"ဒါကြောင့်ငါတို့အမြင်နှင့်ကြားနာမှုများစွာကယ့်ကိုတိကျမှန်ကန်သည်,"ဟောင်းဝါ့ဒ်ကို C Hughes ကပြောပါတယ်, အဘယ်သူသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဦးနှောက်သိပ္ပံ၏ Dartmouth College ကရဲ့ဦးစီးဌာနမှာအမြင်ကို၏ယန္တယားကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး. "ဒါကြောင့်မဟုတ်ကြမယ်ဆိုရင်, ကျနော်တို့ကိုတံခါးမှတဆင့်မသွားမနိုင်, ကျွန်ုပ်တို့သည်ဧကန်အမှန်မ run နိုင် 50 ကိုက်နှင့်အလယ်ဗဟိုလယ်ပြင်၌တစ်ဦးယင်ကောင်ဘောလုံးကိုကိုဖမ်း။ "
တိုတိုပြောရရင်, သင်သည်သူရူးမယ့်: သင့်ကိုမြင်သောအရာကိုအများစုကတခြားလူကိုကြည့်ပါအဘယ်သို့သောအ. သို့သော် Hughes ကျွန်တော်တို့ "မြင်" တ္ထုသေချာပေါက်ကျွန်တော်ရိပ်မိအခြေခံအရည်အသွေးတွေကိုမှမလုပ်ခဲ့ဘူးကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးနေပါတယ်, ကျနော်တို့ကန့်သတ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူလုပ်ကိုင်နေတာအထူးသဖြင့်လာသောအခါ, ထိုကဲ့သို့သော grainy အဖြစ်, Two-dimensional ဓာတ်ပုံ.
"ဒါဟာဖန်တီးပေး, ကျွန်တော်ထင်သည်, ခံစားချက်က … ကျနော်တို့ထွက်မယ့်အရာကိုကြည့်ရှု,"ဟုသူကဆိုသည်. ဦးနှောက်အကြောင်းကိုတည်ဆောက်ရန်ရှိပါတယ် - - "ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကတည်ဆောက်ရန်ရှိသည်နှင့်လူများကိုသင်မြင်ဖို့လိုတယ်တဲ့အသေးအဖွဲလမ်းအတွက်နားလည်သဘောပေါက်ရန်ရှိသည်, သင်မူကား, ရိပ်မိဖို့ဦးနှောက်ကိုလိုအပ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အမြင်ဆင်းသက်လာသည့်အရာဖြစ်သည်။ "
အဆိုပါဝတ်စားဆင်ယင် quandary အရောင်အပေါ်အလေးပေး, se နှုန်း "စစ်မှန်သော" မသောအမြင်. အရောင်များ၏အတွေ့အကြုံကမျက်နှာပြင်ကနေရောင်ပြန်ဟပ်မြင်နိုင်တဲ့အလင်းရောင်ခြည်ရဲ့ length ၏အမြင်ဖြစ်ပါသည်, လူ့မျက်စိဖြင့်သုံးမူလတန်းအရောင်တစ်ဦးအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူ.
ဥပမာအားဖြင့်, ကျွန်တော်အနီရောင် "အဖြစ်ကိုတွေ့မြင်သောအရာကို,"object တစ်ခုတစ်ခုပင်ကိုယ်အရည်အသွေးပြည့်မရ. ထက်, ကရောင်ပြန်ဟပ်သည်အလင်း၏လူသားများသည် 'အံ့သြလောက်အောင်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအမြင်င်. များစွာသောအရောင်ခံစားရတိရိစ္ဆာန်များ၏ပဒေသာအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောလူသားများထက်ရှိပါတယ်. အဆိုပါ ကောင်ပုစွန်မျက်ဆန်, ဥပမာအားဖြင့်, ရှိ 12 လူသားများသည် 'သုံးခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရောင် receptor များ.
ထိုမေးခွန်း inconsequential ပုံရပေမည်နေစဉ်, လူအများတို့သည်ရုပ်ပုံလူ့ဇီဝဗေဒနှင့်အမြင်တို့ interplay ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဥပမာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြောင်းတွေ့ကြပြီ - ဦးနှောက်ကိုသိပ္ပံပညာ၏အများဆုံးလေ့လာခဲ့လယ်ကွင်းအချို့တက်စေ Construction.
"ကြောင်းဘယ်သူမှမယုံနိုင်စရာဖြစ်စဉ်၏ရှိသမျှကိုအသေးစိတ်ကယ့်ကိုစဉ်းစားရန်အကြောင်းမရှိတော့ရှိတယ်, အပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်တစ်ဦးချင်းစီကွာခြားမှုရှိသည်ပါဘူး,"ဟူးခ်ျကပြောပါတယ်. "အခုဆိုရင်, ဤပုံဤနာကျင်စွာခံစားရသိသာအောင်ထိုကဲ့သို့သောအံ့သြဖွယ်အလုပ်တစ်ခုပြုတော်မူပြီဘယ်လို - ငါမသေချာဘူး. ငါဆိုသည်ကား, လူအကြားဤမျှလောက်အပူကို generate အကြောင်းရင်းကျွန်တော်တို့အများစုကကျနော်တို့ထွက်မယ့်အရာကိုကြည့်ရှုအံ့ထင်လို့ထင်ပါတယ်။ "
Hughes အကြောင်းအရာပိုပြီးသုတေသနဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်, နှင့်အပြာဖြူရောင်ဖြစ်ရပ်ဆန်း anomalous trichromats မှတစုံတခုကို၏ရလဒ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း hypothesized (မူလတန်းအရောင်အနည်းငယ်ကွဲပြားအမြင်များကိုရှိသည်သောလူ) တစ်ဦးမှ (အလွန်ခက်ခဲ) optical ထင်ယောင်ထင်မှားစကြရအောင်, တစ်ခါတစ်ရံမရေမရာရှိဆဲဟုခေါ်.
အနောက်ပြန်လှည့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်သူမည်သူမဆို ခုံးနှင့် concave စက်ဝိုင်း၏တိမ်းညွတ်, သို့မဟုတ် တစ်မျှင် silhouette အချို့သောထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်တွေလှန်ဖို့ဘယ်လောက်ခက်ခဲစိတ်ကူးတစ်ခုရလိမ့်မည်, သို့မဟုတ် "disambiguate".
နောက်ထပ်အမြင်သုတေသီ. ရောဘတ်က Fendrich, Hughes သူကြာသပတေးနေ့ညဦးယံအချိန်မှာရွှေဖြူရောင်အဖြစ်အဝတ်အစားကိုမြင်လျှင်ပြောသည်, နှင့်အပြာရောင်-အနက်ရောင်သောကြာနေ့နံနက်, သောတစုံတယောက်ကို image ကိုကျအောင်တတ်နိုင်လူမျိုး၏လူနည်းစုဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်. Fendrich Dartmouth College ကသွားရောက်ကြည့်ရှုပညာရှင်ဖြစ်သည်, စစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဦးနှောက်သိပ္ပံဌာန.
ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်ဘာကလေမှာအာရုံသိမှု၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်များအတွက်ှစ်တနီဓါတ်ခွဲခန်းမှာ, ထိုသို့ဒါဝိဒ်သည် Whitney ပုံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရိုးရှင်းသောကပြောပါတယ် - ကအခြအတစ်ခုမရေမရာရှိဆဲင်.
"သင်တို့သည်အလင်းတိုက်ရိုက််စားဆင်ယင်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ရည်ညွှန်းခွင့်, ငါသည်ထိုအလင်းသည်စားဆင်ယင်နောက်ကွယ်မှမှလာသောရည်ညွှန်းခွင့်,"ှစ်တနီကပြောပါတယ်. "ဒါဟာတကယ့်ရိုးရှင်းတဲ့ခြားနားချက်မှဆင်းအနာစိမ်း, ဒါကြောင့်တကယ့်ရိုးရှင်းတဲ့မရေမရာရှိဆဲဖြစ်ပါတယ်။ "
"ဒါဟာထင်ယောင်ထင်မှားင်,"ှစ်တနီကပြောပါတယ်. "ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်တော်မူ၏။ "